Sekretera jeneraly lefitra vaovao an'ny UNWTO, ahoana no nahatongavany tany?
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Georgia » Sekretera jeneraly lefitra vaovao an'ny UNWTO, ahoana no nahatongavany tany?
Lehilahy tsara izy, ary fanatsarana lehibe ho an'ny UNWTO, saingy ny fomba nahatongavany tany dia mety ho anisan'ny lalao. Raha ny angom-baovao voaray avy amin'ny loharanom-baovao eTN, dia notendren'ny sekretera jeneralin'ny UNWTO, Zurab Pololikashvili, ny masoivohon'i Kolombia Jaime Alberto Cabal ho mpisolo azy.
Tsy mbola nohamafisin'ny UNWTO tamin'ny fomba ofisialy izany.
Ny eTN dia efa nahazo vaovao taloha ary niantso ny masoivoho Cabal tamin'ny volana martsa mba hanamafy na handà ireo tsaho. Nilaza ny masoivoho ny eTN fa tsy nanana drafitra toy izany hiasa amin'ny UNWTO izy ary niresaka tamin'i SG Zurab indray mandeha monja taorian'ny fifidianana. Nilaza tamin'ny eTN izy fa tsy misy antony tokony hamelany ny toerany amin'ny maha masoivohon'i Kolombia azy any Austria ary hifindra any Madrid haka toerana ao amin'ny UNWTO.
Ilay loharanom-baovao eTN ihany no nanambara fa ny fanendrena andrasana dia ao anatin'ny fifanarahana efa vita mangina talohan'ny fifidianana Sekretera jeneralin'ny UNWTO. Ny loharanom-baovao dia nilaza tamin'ny eTN tamin'io fotoana io fa ny antony tokana nahatonga ny masoivohon'i Cabal nitady ny toeran'ny sekretera jeneralin'ny UNWTO dia ny nanala ny vato tamin'ny kandidà hafa ary nampidina ireo vato ireo tamin'i Zurab izay nilatsaka ho any Georgia.
Ity hetsika ity dia mety nanome ny maro an'isa ilaina an'i Zurab, noho izany dia azony natao ny nahazo ny maro an'isa tamin'ny fifidianana fihodinana faharoa. Ho valin'izay, i Zurab dia nampanantena ny toerana lefitry ny masoivoho Cabal. eTN efa nandre izany hatramin'ny nifidianan'ny Komity Mpanatanteraka herintaona lasa izay tao Madrid. Nandà izany i Cabal raha niresaka tamin'ny eTN izy tamin'ny volana martsa.
Ny mahaliana ihany koa dia ireo kandidà hafa rehetra izay nanana toerana tao amin'ny UNWTO no lasa na nasaina nandao ny fikambanana, ary i Ambasadaoro Cabal kosa izao.
Na eo aza izany, ny fanendrena an'i Cabal dia tokony ho raisina ho hetsika tsara tokoa. Cabal dia mahafeno fepetra ary mila solombavambahoaka matanjaka ny fikambanana hiverenana amin'ny làlana tsara. "Ny zava-misy azon'i Andriamatoa Cabal idirana amin'ny haino aman-jery tokana dia tsio-drivotra vaovao sy vaovao avy any Madrid," hoy i Juergen Steinmetz, mpanonta ny eTN.
Iza moa i Jaime Alberto Cabal?
Ny sekretera jeneraly lefitry ny UNWTO vaovao Jaime Alberto Cabal, izay minisitry ny Colombia taloha ary masoivohon'i Kolombia tany Austria, Kroasia, Slovakia, Slovenia, Hongria, Montenegro, Repoblika Tseky ary Serbia dia nitana andraikitra samihafa teo amin'ny sehatry ny orinasa sy ny orinasa. Nandray ny andraikiny amin'ny governemanta izy ary koa ny hetsika ara-diplaomatika sy akademika izay manavaka ny tenany amin'ny fitarihany sy ny fitantanana azy, mifantoka amin'ny famoronana sy ny fanovana ny fikambanana misy fiatraikany lehibe amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena ao amin'ny firenena, ary amin'ny alàlan'ny fandraharahany, ny famoronana asa. , asa sy fampianarana.
Ny fahaizany sy ny fahaizany matihanina dia mifandraika amin'ny famolavolana sy ny fampiharana ny politikam-panjakana amin'ny fampandrosoana ireo sehatra stratejika sy ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena ary maharitra ny firenena, indrindra eo amin'ny sehatry ny indostria sy fizahantany, ary mifandray amin'ny famoronana, napetraka miakatra, manitsy sy mandrafitra ny fikambanana, fikambanana orinasa ary orinasa ary koa amin'ny famolavolana sy fandefasana programa, tetik'asa ary hetsika izay misy fiatraikany amin'ny sehatra sy faritra samihafa.
Nandritra ny asany dia nanatontosa ny talen'ny fikambanana sosialy ho an'ny fampandrosoana ONG any Kolombia izy, filohan'ny fikambanan'orinasa orinasa madinidinika sy mpanelanelana - ACOPI, CEO an'ny orinasa Danaranjo SA, ary mpanolotsaina taloha an'ny eropeana teo aloha Fiarahamonina ara-toekarena eo amin'ny sehatry ny tetik'asa sosialy amin'ny fampandrosoana orinasa miaraka amin'ny fonenany any Espana ary, avy eo, any Suisse sy Angletera.
2. Fiofanana akademika sy matihanina
Injeniera indostrialy avy amin'ny oniversite Javeriana any Bogota miaraka amin'ny fianarana amin'ny teny anglisy sy toekarena avy amin'ny University of Georgetown ary Master of Economy avy amin'ny American University any Washington DC Manana mari-pahaizana diplaoma amin'ny Senior Management avy amin'ny Los Andes University sy Inalde Business School any Bogota DC koa izy. Toy izany koa, nianatra momba ny fandraharahana sy ny fitantanana ho an'ny orinasa kely sy salantsalany ary ny fitantanana orinasa sosialy ao amin'ny University of South Carolina, ny IE Business School any Madrid ary ny Complutense University any Espana izy.
Ankoatry ny Espaniôla, amin'ny alàlan'ny fampiofanana azy sy ny traikefany matihanina, dia mahay miteny anglisy izy amin'ny maha-orinasa azy.
Nahavita zava-bita manan-danja nandritra ny asany matihanina momba ny fanohanan'ny fikambanana sosialy, mpandraharaha ary orinasa kely izy tamin'ny alàlan'ny fandefasana programa toa ny microcredit, ny fananganana orinasa vaovao ary ny fampidirana ny politikam-bahoaka ary ny fampidirana azy amin'ny sehatra manerantany.
Amin'ny maha-minisitry ny fampandrosoana ara-toekarena azy dia nampiroborobo sy nandany lalàna manan-danja amin'ny fanamafisana ireo sehatra sy orinasa marefo izy, nanondro ny lalàna 590 ho fanohanana ireo orinasa bitika, kely sy salantsalany, lalàna 550 ho an'ny famonjena sy famerenana amin'ny laoniny ny orinasa ary ny lalàna 546 ho an'ny trano sosialy. Nampiroborobo ny famoronana vola sy programa microcredit ary koa ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena amin'ireo masoivoho manan-danja amin'ny firenena samy hafa sy ny Firenena Mikambana, toa ny UNIDO sy UNPD ankoatry ny hafa.
Eo amin'ny sehatry ny diplaomasia, amin'ny maha Ambasadaoron'i Korea Selatan azy, dia nandray anjara tamin'ny fifampiraharahana tamin'ny fifanarahana momba ny varotra maimaimpoana teo amin'ny firenena roa tonta izy, amin'ny fampitomboana ny fiaraha-miasa sy ny asa aman-draharaha eo amin'ny sehatry ny fanondranana sy fampiasam-bola Kolombiana ataon'ny orinasa Koreana, ary ny fanamafisana orina ny masoivoho. Tany Austria sy ireo firenena nifanarahana dia niavaka izy tamin'ny alàlan'ny fananganana ny fisokafana sy ny fanokafana ireo masoivoho any Kolombia, amin'ny alàlan'ny fampandehanana tetikasa fiaraha-miasa manan-danja indrindra indrindra eo amin'ny sehatry ny fandraharahana any Kolombia sy amin'ny fametrahana fampiasam-bola any Kolombia amin'ireo orinasan'ireto firenena ireto.
Amin'ny maha Permanente Representative an'i Colombia an'ny United Nations Organisation sy Organisations international hafa miorina ao Vienna, izy no misolo tena ny firenena ao amin'ny United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC, the International Atomic Energy Agency - IAEA, ary ny United Nations Industrial Development Office - UNIDO, ankoatry ny hafa.
3.1 Amin'ny sehatry ny fizahan-tany
Marihina ny zava-bitany sy ny vokatra azony teo amin'ny sehatry ny fizahantany. Teo ambany fitarihany tamin'ny naha filohan'ny fikambanan'ny hotely sy fizahantany any Kolombia dia nandray anjara tamin'ny famolavolana hetsika vaovao ho fampandrosoana sy fanamafisana an'ity sehatra ity izy tamin'ny alàlan'ny lalàna 1101 momba ny fizahantany, tamin'ny alàlan'ny fampiroboroboana ny lalàna 788 momba ny fanavotana hetra ho an'ny fananganana sy fanavaozana ny Hotely, ary amin'ny fanavaozana ny Tahiry fampiroboroboana ny fizahan-tany any Kolombia - FONTUR. Nanolotra sosokevitra koa izy hampifandray ny PROEXPORT, fantatra ankehitriny amin'ny hoe PROCOLOMBIA, amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany iraisam-pirenena.
Ny fanombohana ireo programa fiaraha-miasa manan-danja amin'ireo firenena mihoatra ny 15 izay manao fandaharam-panofanana iraisam-pirenena ho an'ireo mpandraharaha Kolombiana mihoatra ny 950 dia eken'ny mpitarika ny sehatry ny fizahantany. Izy koa dia efa nialoha lalana ny tetik'asa mifantoka amin'ny kalitaon'ny fizahantany, fampandrosoana maharitra, hotely mahomby amin'ny tontolo iainana ary andraikitra ara-tsosialy.
Izy no nisolo tena ny sehatry ny fizahan-tany ao amin'ny birao mpanatanteraka PROCOLOMBIA, FONTUR ary ny Country Brand "Colombia es Pasión". Izy dia filohan'ny Antenimieran'ny Fizahan-tany Kolombiana sy ny Fikambanan'ny Hotely Ibero-Amerikanina.
Mikasika ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany: tamin'ny maha minisitra azy dia nandray anjara tamin'ny fampidirana an'i Colombia tao amin'ny Organisation izy, ary tamin'ny naha-mpitarika orinasa dia nandray anjara tamin'ny fampiroboroboana an'i Kolombia izy ho toy ny toerana fandraisam-bahiny ho an'ny UNWTO World Assembly faha-17, izay nankalazaina tao Cartagena tamin'ny 2007, ary nandritra ny taona maro dia nitana ny toeran'ny filoha lefitry ny mpikambana ao amin'ny Fikambanana izy. Izy koa dia nandamina sy nandray anjara tamin'ny naha mpampianatra azy tamin'ny seminera manan-danja sy fora an'ny Fikambanana.
3.2 Ireo zava-bita sy zava-bita hafa
Nanasa azy ny firenena samy hafa ho mpanolo-tsaina sy mpampianatra ary mpandray anjara amin'ny filankevitry ny fikambanana sy orinasa Kolombiana, manasongadina ny tsenan'ny tsenan'i Kolombia, ny Banky Sosialin'i Caja ary, eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, ny Birao Mpanatanteraka ao amin'ny CAF- Banky fampandrosoana any Latinina Amerika. Nandritra ny taona maro dia mpikambana tao amin'ny Vaomieran'ny fampihavanam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana izy. Noho ny zava-bitany sy ny vokatra azony dia nahazo mari-pankasitrahana sy mari-pankasitrahana marobe avy amin'ny governemanta eo an-toerana sy isam-paritra any Kolombia, ny Governemanta Nasionaly Kolombiana izy tenany, ary avy amin'ireo orinasa iraisam-pirenena.
Nandidy an'i Uber mba hitsahatra tsy hiasa ao Wina
Golden Tulip dia nanao sonia ny MoU miaraka amin'ny Ice Land Water Park eo ambany faneken'ny RAKTDA